जापानमा सर्वश्रेष्ठ चेरी खिलने ठाउँ र सीजन! हिरोसाकी कासल, माउंट योशिनो ... - Best of Japan
चेरी ब्लासम र गीशा = शटरस्टक
यस पृष्ठमा, म सुन्दर चेरी फूलहरूको साथ दर्शनीय स्थलहरूको परिचय दिनेछु। किनकि जापानी मानिसहरु यहाँ र त्यहाँ चेरी फूलहरु रोप्न, यो उत्तम क्षेत्र निर्णय गर्न धेरै गाह्रो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई ती क्षेत्रहरूमा परिचय दिनेछु जहाँ विदेशबाट आएका यात्रीहरूले चेरी फूलहरू सहित जापानी भावनाहरूको आनन्द लिन सक्दछन्।
कृपया जापानी चेरी ब्लाम्सका लागि निम्न लेखहरू पनि सन्दर्भ गर्नुहोस्।
फोटोहरू: साकुरा- जापानमा चेरी फूल
अप्रिल २०२० तिर, जब कोरोनाभायरस संक्रमणको नयाँ प्रकार संसारभरि फैलियो, मैले फेसबुकको माध्यमबाट समर्पण गरें, स beautiful्कटमा परेका सबैलाई सुन्दर चेरीका फोटाहरू। यस पृष्ठमा फोटाहरू त्यस समयमा प्रयोग गरिएको थियो। यदि तपाईं नुहाएर आफैलाई नयाँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ भने म खुशी हुनेछु।
यदि तपाईंले मलाई जापानको सबैभन्दा सुन्दर चेरी ब्लाउज हो भनेर सोध्नु भयो भने, म भन्छु फुकुशिमा प्रान्तको मिहारू तकिजाकुरा। मिहारू तकिजाकुरा रूख १००० बर्ष भन्दा पुरानो हो। यो सुन्दर चेरी रूख लामो समयदेखि सुरक्षित छ र स्थानीय मानिसहरूले यसलाई माया गरेका छन्। आभासी जाऔं ...
फोटोहरू: ११ खोजशब्दहरू जापानी चेरी फूलहरूको पूर्ण आनन्द लिन
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई परिचय दिनेछु कसरी चेरी फूलहरूको आनन्द लिने, जुन जापानको पुरानोबाट विरासतमा आएको छ। यो ११ कुञ्जी शब्दहरूमा समेकित छ। म ती कुञ्जी शव्दहरूको बारेमा धेरै राम्रा चेरी ब्लास्म फोटोहरूको साथ विवरण दिनेछु। कृपया जापानी चेरीका लागि निम्न लेखहरू पनि सन्दर्भ गर्नुहोस् ...
जापानमा सर्वश्रेष्ठ चेरी खिलने ठाउँ
हिरोसाकी कासल (हीरोसाकी शहर, अओमोरी प्रान्त)
हानमियामा पार्क (फुकुशिमा शहर)
यूनो पार्क (टोकियो)
Shinjuku Gyoen राष्ट्रीय उद्यान (टोक्यो)
Takato महल रुइन पार्क (Ina शहर, नागानो प्रान्त)
दार्शनिक पथ (क्योटो)
केमा सकुरोनोमिया पार्क (ओसाका)
ओसाका कासल (ओसाका)
माटो योशिनो (योशिनो चो, नारा प्रान्त)
हिमेजी महल (हिमेजी शहर, ह्योगो प्रान्त)
मियाजीमा टापु (हत्सुकाइची शहर, हिरोशिमा प्रान्त)
जापानीहरू वास्तवमा चेरी फूलहरू मन पराउँछन्। जापानमा, होरीकाइडो र तोहोकु क्षेत्र जस्ता चिसो क्षेत्रहरू बाहेक मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको शुरूसम्म चेरी फूलहरू फूल्छन्। जसरी चेरी फूलहरू चाँडै तितरबितर भए, जापानीहरूले चेरीको रूखमुनि एउटा सिट राख्ने बित्तिकै चेरी फूल फुल्ने बित्तिकै यसको शीर्षमा बसेर र भोज मनाउने छन्। यदि तपाई जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ जब चेरी फूलहरू खिलिरहेका छन्, तपाईले त्यस्ता पार्टीहरूको अवलोकन यहाँ र त्यहाँ पाउनुहुनेछ। जापानको दक्षिणबाट चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन्। टोहोकु क्षेत्रको उत्तरी भागमा र होक्काइडोमा चेरी फूलहरू अप्रिलको अन्तदेखि मेको सुरूमा हुन्छन्। त्यसोभए, यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने तपाईंले त्यस ठाउँमा जानुहुन्छ जहाँ चेरी फूलहरू त्यस समयमा फूल्छन्। कृपया चेरी फूलहरूको पीछा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्!
जापानको हीरोसाकीको हिरोसाकी कासल पार्कमा चेरी फूल
हीरोसाकी तोहोकु क्षेत्रको उत्तरी भागमा एक धेरै सुन्दर शहर हो। यस शहरको बीचमा हिरोसाकी क्यासल छ, जुन आफ्नो चेरी फूलहरूको लागि प्रख्यात छ। जब चेरी फूल खिलन्छ, पूरै महल चेरी फूलहरू संग आवरण हुन्छ। मलाई यहाँ चेरी फूलहरू मन पर्छ।
हिरोसाकी महललाई अब हिरोसाकी पार्क पनि भनिन्छ। चेरी ब्लासम फेस्टिवल यहाँ प्रत्येक वर्ष अप्रिलको लेटदेखि मेको शुरुवातमा आयोजित हुन्छ। केही चेरी फूलहरू अप्रिलको बीचमा खिलछन्, त्यसैले लाइट अप मध्य अप्रिल देखि रात सम्म गरिनेछ।
हिरोकी कासलमा चेरी फूलहरू टोकियो र ओसाका भन्दा धेरै ढिलो छन्। यदि तपाईं मध्य अप्रिल पछि जापान आउनुभयो भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईंको यात्रामा हिरोसाकी क्यासल थप्न।
अधिक विस्तृत जानकारीको लागि कृपया तलको साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> हिरोसाकी महलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
फुकुशिमा प्रान्त, फुकुशिमा प्रान्त, जापान = शटरस्टकमा हन्यामामा (फूलहरूको पहाड) पार्कमा चेरी ब्लाम्स वा साकुरा र गुलाबी पीच फूलहरूको सुन्दर दृश्य।
फुकुशिमा प्रान्तको हनमियामा पार्कमा, यस पृष्ठमा देखाइए अनुसार वसन्त inतुमा प्लम, आडू, चेरी फूल र अन्य फूलहरू एक पछि अर्को खिलछन्। यो पार्क वास्तवमा किसानको स्वामित्वमा रहेको सानो पहाड हो। यद्यपि किसानले निर्णय गरे कि यो ल्याण्डस्केपलाई एकाधिकार गर्ने फोहोर थियो र खोलियो ...
हानमियामा तोहोकु जिल्लाको फुकुशिमा प्रान्तमा छ। यद्यपि यो सानो पहाड हो, जब वसन्त everyतु प्रत्येक वर्ष आउँछ, प्लम, म्याग्नोलिया, चेरी फूल, आटा र अन्य फूलहरू एक पछि अर्को खिल।
"सोमियोशिनो" नामको प्रतिनिधि चेरी फूलहरू प्रत्येक वर्ष अप्रिलको मध्यदेखि अप्रिलको अन्त्यसम्म खिलिन्छन्। यद्यपि, अप्रिलको सुरू देखि मेको सुरूवातमा क्रमशः सोमियोषिनो बाहेक चेरी खिल्यो। त्यसो भए हन्यामामा, तपाईले चेरी फूलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ अपेक्षाकृत लामो समयको लागि।
हानमियामा मा, स्थानीय किसानहरु द्वारा फूल रूखहरु बेच्न को लागी करीव १०० बर्ष देखि जारी छ। यो करीव years० वर्ष पहिले जनताको लागि खुला हुन सुरू भयो र त्यसपछि चेरी फल्ने ठाउँको रूपमा परिचित भयो। वसन्त beautifulतुमा सम्पूर्ण पहाड सुन्दर फूलले डुबेको दृश्य अति उत्तम छ। हानमियामा सम्म, अप्रिलको शुरुदेखि अप्रिल २२ सम्म जेआर फुकुशिमा स्टेशनबाट सिधा बस संचालित हुनेछ। बसले करीव २० मिनेट लिन सक्दछ। केवल भीडहरू, यसले अधिक समय लिन सक्दछ।
>> हन्यामामाको विवरणहरूको लागि, कृपया यो साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
Ueno पार्क टोक्यो प्रतिनिधित्व एक ठूलो पार्क हो र आकार मा करीव 530,000 वर्ग मीटर छ। यस पार्कमा चिडियाखाना र संग्रहालयहरू छन्। र वसन्त nearlyतुमा, करीव १००० चेरी फूलहरू फूलेका छन् र यति धेरै व्यक्तिहरूको भीड छ। यदि तपाई युनो पार्क आउनुहुन्छ जब चेरी फूल फूलिन्छ, तपाईं जापानी मानिसहरु लाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ जसले चेरी रूखमुनि हास्यास्पद कुरा गर्छन्। यूनो पार्कमा, चैरी फूलहरू प्रत्येक वर्ष मार्चको पछि देखि अप्रिलको शुरुमा खिलिन्छन्।
>> Ueno पार्क को विवरण को लागी, कृपया यो साइट मा सन्दर्भ गर्नुहोस्
चेन्जरी ब्लासम सीजन सिन्जुकु Gyoen, टोक्यो जापान = शटरस्टकमा
फोटोहरू: टोक्यो मा Shinjuku Gyoen राष्ट्रीय उद्यान
यदि तपाईं टोकियोमा पार्क अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, म सिन्जुुकु ग्योएन राष्ट्रीय उद्यान सिफारिस गर्दछु। यो पार्क टोक्यो मा सबैभन्दा ठूलो डाउनटाउन क्षेत्र Shinjuku मा स्थित छ। एकचोटि तपाईंले यस पार्कमा प्रवेश गर्नुभयो, तपाईं सुन्दर र शान्त संसारबाट स्फूर्ति पाउनुहुनेछ। कृपया शिन्जुकुको बारेमा निम्न लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस् ...
Shinjuku Gyoen राष्ट्रीय उद्यान Shinjuku निकट पार्क हो जो टोक्योको सबैभन्दा व्यस्त शहर क्षेत्र हो। Shinjuku धेरै भवनहरूको एक जिल्ला हो, तर जब तपाइँ Shinjuku Gyoen प्रवेश गर्नुहुन्छ, सुन्दर आधुनिक पश्चिमी बगैंचाले तपाईंलाई स्वागत गर्दछ। यो पार्क कुनै समय शाही परिवारको बगैंचा थियो। अब, धेरै टोकियोका नागरिकहरू १००० भन्दा बढीको साथ पार्कमा रूखमुनि विश्राम गरिरहेका छन्।
Shinjuku Gyoen मा करीव ११०० रूखहरुमा करीव types 65 प्रकारका चेरी रूखहरू छन्। त्यहाँ प्रकारको चेरी फूलहरू छन् जुन फेब्रुअरीको मध्यतिर सुरु हुन्छ, र केही प्रकारको चेरी फूलहरू अप्रिलको अन्त्यसम्म खिलिरहेका छन्। त्यसोभए शिन्जुकु ग्योएनमा तपाईले लामो समयको लागि चेरी फूलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। एक प्रतिनिधि आधुनिक चेरी रूख "सोमियोशिनो" मार्चको अन्तदेखि अप्रिलको शुरुमा खिलिन्छ। "Ichiio", Shinjuku Gyoen को मुख्य चेरी रूख, अप्रिल को बीच देखि अप्रिल को अन्त सम्म फूल्नेछ। इचियो एक धेरै मात्रामा चेरी रूख हो। यदि तपाईं सिन्जुुकु ग्योएनमा चेरी फूलहरूको आनन्द लिनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई यो इचिओ हेर्न सिफारिस गर्दछु।
>> Shinjuku Gyoen को विवरणको लागि, कृपया यो साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
चिदोरीगाफुची इम्पीरियल दरबारको उत्तरपश्चिमपट्टि खाई हो। यो १th औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो जब इडो क्यासल (अब इम्पीरियल प्यालेस) बनाउँदै थियो। चिडोरीगाफुची टोकियो प्रतिनिधित्व गर्ने एक चेरी-खिलने स्थल हो। यहाँ, मार्च महिनाको अन्तदेखि अप्रिलको शुरुवातमा चेरी फूलहरू फूल्नेछ। त्यस समयमा, करिब २17० चेरी खिलहरू the०० मिटर लामो पैदल मार्गमा खिलनेछन्। यो धेरै सुन्दर छ, किनकि चेरी फूलहरू सघन रूपमा फूलेका छन्। तपाईं त्यो खोरमा डु boat्गा चढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले डु boat्गाबाट देख्नु भएको चेरी फूलहरू पनि भव्य छन्।
टाकाटो क्यासल रियन्स पार्क भ्रमण गर्ने यात्रुहरू जापान = शटरस्टक
टाकाटो क्यासल रियन्स पार्कमा करिब १,1,500०० चेरी फूलहरू छन् जसलाई "ताकाटो-हिगानजाकुरा" भनिन्छ। यो चेरी रूख सामान्य चेरी फूल भन्दा गुलाबी छ। महल भग्नावशेषहरूमा खिलिएको पुरानो चेरी फूलहरू धेरै शक्तिशाली छन्।
१ 16 औं शताब्दीमा ताकाटो क्यासल प्रख्यात शासक शिन्जेन ताकेडाको नियन्त्रणमा थियो। जब उहाँ बित्नुभयो र उनको बच्चा मोरिनोबु निशाना महलको मालिक थिए, यस महललाई नोबुनगा ओडीएले आक्रमण गर्‍यो जसले लगभग जापानलाई एकीकृत गरिसकेका थिए। लडाई पछि मोरिनोबु दु: खी थिए। भनिन्छ कि ताकाटो महलको चेरी फूलहरू उसको रगतले रातो दागले बनेका थिए।
टाकाटो - हिगानजाकुरा अप्रिलको सुरू देखि अप्रिलको अन्त्यसम्म खिलिन्छ। हालसालै, ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण अप्रिलको सुरुमा यो चुचुरो लाग्न सक्छ।
अधिक विस्तृत जानकारीको लागि कृपया तलको साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जे होस् यो साइट जापानी भाषामा लेखिएको छ, तपाईं अंग्रेजीमा पढ्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं साइटको माथिल्लो दाहिने कुनामा गुगल अनुवादको भाषा छान्नुहुन्छ।
>> टाकाटो कैसल भग्नावशेष पार्कको विवरणहरूको लागि, कृपया यस साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
वसन्त seasonतुमा दार्शनिकहरूको पैदल यात्रा
क्योटो शहरको पूर्वपट्टि, त्यहाँ क्योटो विश्वविद्यालय छ जुन जापानको अग्रणी राष्ट्रिय विश्वविद्यालय हो। यस विश्वविद्यालयमा Kitaro NISHIDA नाम गरेको प्रख्यात दार्शनिक भएको थियो। भनिन्छ कि जब ऊ सोच्छ उसले राम्रोसँग टहल्यो। यो "दार्शनिक पथ" (Tetsugaku-no-michi) कि उसलाई हिंड्न मन पर्यो।
दार्शनिकको मार्ग क्योटोको पूर्वमा गिन्काकुजीदेखि यसको दक्षिणमा नानजेन्जीसम्म २ किलोमिटर टाढा छ। यस सडक छेउमा सानो नदी (हाइड्रोफोबिक) बग्दछ। मार्चको अन्त्यतिर अप्रिलको सुरुतिर सडक र स्ट्रिमका वरिपरि धेरै चेरी फूलहरू फूल्छन्।
मलाई दार्शनिकको मार्ग मन पर्छ र म प्रायः हिड्दछु। क्योटो चेरी खिलने मौसम र शरद पातहरूको मौसममा धेरै भीड हुन्छ। यस रोड वसन्तमा पनि भीड हुन्छ, तर पर्यटक दार्शनिकहरू जस्तो चुपचाप हिंड्छन्। दार्शनिक मार्ग एक राम्रो ट्रेल छ कि यस्तो पैदल उपयुक्त छ।
>> दार्शनिक मार्गको विवरणको लागि, कृपया यो साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
क्योटो, जापानको वसन्त चेरी ब्लासम फेस्ट = शटरस्टकको समयमा मारुयामा पार्क
भीडहरूले मारुयामा पार्क = शटरस्टकमा मौसमी रातको हनामी चाडहरूमा भाग लिएर वसन्त चेरी खिलहरूको मजा लिन्छन्।
मारुयामा पार्क क्योटो शहरमा यासाका तीर्थको पछाडि 90,000 ०,००० वर्ग मिटर फैलिएको ठूलो पार्क हो। यासाका तीर्थ र मारुयामा पार्क क्योटोका नागरिकहरूको लागि सब भन्दा परिचित ठाउँहरू हुन्। सप्ताहन्तमा धेरै नागरिकहरू यहाँ हिड्न रमाउँदछन्। म अक्सर यस पार्कमा ड्रप गर्दछु जब म Gion आदि जान्छु। हालसालै त्यहाँ धेरै विदेशी पर्यटकहरू पनि छन्। तिनीहरू मध्ये केही भाँडाको सुन्दर किमोनोको साथ आएका थिए।
मारुयामा पार्क यसको चेरी फूलका लागि प्रसिद्ध छ। मारुयामा पार्कको बीचमा, त्यहाँ चित्रको जस्तै तेजस्वी चेरी फूलहरू छन्, र यो बेलुका उज्यालो हुनेछ। यस पार्कमा 700०० चेरी खिलने रूखहरू छन्, र जब चेरी फूलहरू खिलिरहेका छन् धेरै मानिसहरूले "हनामी" (चेरी फूलहरूको प्रशंसा गर्न एक पार्टी) मा रमाउँछन्। मारुयामा पार्कमा चेरी फूलहरू मार्चको अन्त्यदेखि प्रत्येक वर्षको अप्रिलको शुरुमा खिलिन्छन्।
>> Maruyama पार्क को विवरण को लागी, कृपया यो साइट मा सन्दर्भ गर्नुहोस्
जापान मा धेरै व्यक्तिहरु संग बगैंचामा चेरी फूल फूल। केमा सकुरोनोमिया पार्क साकुरा बगैंचाको एक प्रसिद्ध स्थान = शटरस्टक थियो
ओसाकासँग धेरै नदीहरू छन् र भनिन्छ पानीको शहर। ओमाका कासलको नजिक ओकावा नदीको नदीपट्टिमा केमा साकुरोनोमिया पार्क लगभग 4.2.२ किलोमिटर लामो हुन्छ। धेरै ओसाका नागरिकहरू यस पार्कमा आराम गर्छन् र टहलको आनन्द लिन्छन्। यहाँ ,,4,800०० चेरी रूखहरू छन्। चेरी फूलहरू मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको सुरूमा फूल्नेछ। यी चेरी ब्लास्म रूखहरूको मुनि, धेरै मानिसहरूले आसन लिन्छन्, त्यसमा बस्छन् र हानमी खोल्छन् (चेरी ब्लासम दृश्य)। केमा सकुरोनोमिया पार्क जानका लागि, यो JR सकुरोनोमिया स्टेशन वा केइहान - मेट्रो टेम्माबाशी स्टेशनबाट उड्न सुविधाजनक छ।
>> केमा सकुरोनोमिया पार्कको विवरणहरूको लागि, कृपया यस साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
वसन्तमा ओसाका महल
ओसाका महल एक विशाल महल हो जुन १th औं शताब्दीको अन्तमा जापानको राजनीतिको केन्द्र बन्न पुग्यो। यो १th औं शताब्दीमा एदो (अब टोकियो) मा टोकुगावा शोगुनेटले नष्ट गरेको थियो, त्यसकारण बाँकी खुनहरू र ढु stone्गाका पर्खालहरू त्यस पछि निर्माण गरियो। महल टावर १ 16 .१ मा पुनर्निर्माण गरिएको थियो।
ओसाका कासल अब पार्कको रूपमा खुला छ। ओसाका कासलमा करीव 3000००० चेरी रूखहरू छन्। मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको सुरूमा चेरी फूलहरू प्रत्येक वर्ष खिलछन्। यो रातमा उज्यालो हुनेछ। यस समयमा, यो धेरै व्यक्तिहरूको भीडले भरिएको छ। महल टावरको the औं फ्लोरमा अवलोकन डेक छ, र यस अवलोकन डेकबाट चेरी फूलहरूको दृश्य उत्कृष्ट छ।
फोटोहरू: ओसाका कासल - शीर्ष तलाबाट अद्भुत दृश्यको आनन्द लिनुहोस्!
ओसाका पर्यटन स्थलको मुख्य आकर्षण मध्ये एक ओसाका महल हो। ओसाका महलको टावर ओसाका शहरमा लामो दुरीबाट देख्न सकिन्छ। रातमा, यो प्रकाशको साथ चम्कन्छ र धेरै सुन्दर छ। दुर्भाग्यवस, ओसाका महलको महल एक अपेक्षाकृत नयाँ हो जुन ...
योशिनोमा, नारा, जापान शहर र चेरी रूखहरूको वसन्त seasonतुको मौसममा = शटरस्टक
फोटोहरू: माउन्ट। Yoshino -30,000 चेरी रूखहरू वसन्तमा खिलछन्!
यदि तपाईं जापानको सबैभन्दा सुन्दर चेरी ब्लास्म प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने, म माउंट जान सिफारिश गर्दछु। नारा प्रान्तमा योशिनो। यस पहाडमा, ,30,000०,००० चेरी रूखहरू वसन्त inतुमा खिलछन्। माउन्ट किन्टोत्सु एक्सप्रेस द्वारा योशिनो क्योटो स्टेशनबाट करीव १ घण्टा minutes० मिनेट दक्षिणमा अवस्थित छ। म आशा गर्दछु तपाइँको ...
माउन्ट योशिनो mountain 350० मिटर उचाईको पहाड हो जुन किन्टोत्सु एक्सप्रेसबाट क्योटो स्टेशनबाट १ घण्टा minutes० मिनेट दक्षिणमा अवस्थित छ। यो प्राचीन कालदेखि नै चेरी खिलने ठाउँका रूपमा प्रख्यात थियो। त्यहाँ करीव ,1०,००० चेरी फूलहरू छन्। धेरै जसो "शिरो-यामाजाकुरा" प्रकारको चेरी फूलहरू हुन्। यस विविधताका चेरी फूलहरू धेरै लामो समयसम्म बाँच्दछन् र उमेर प्रायः सयौं वर्ष भन्दा बढी हुन्छ। प्रत्येक वर्ष अप्रिलको सुरूदेखि नै पहाडको खुट्टाबाट क्रममा चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन्।
पहाडको तल्लो भागमा रहेको चेरी रूखलाई "शिता-सेन्बोन" भनिन्छ (यसको मतलब तल १००० चेरी रूखहरू छन्)। र पहाडको बीचमा चेरी फूलहरू "नाका - सेन्बोन" (बीचमा १,००० चेरी रूखहरू) हुन्, पहाडको शिखरमा चेरी फूलहरू "उए - सेन्बन" (माथि १,००० चेरी ब्लास्म्स) हुन्, र पछाडि चेरी फूलहरू "Oku - सेन्बोन" हुन् (पछाडि १,००० चेरी ब्लास्म्स)। पहाड सुन्दर चेरी फूलले ढाकिएको दृश्य मनमोहक छ। माउन्ट योशिनोसँग धेरै र्योकन (जापानी शैलीको होटलहरू) छन्, त्यसैले यदि तपाईं माउन्टमा रहनुभयो भने। योशिनो, ती Ryokan मा रहनुहोस्।
>> माउन्टको विवरणहरूको लागि। योशिनो, कृपया यो साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
जापान हिमेजी महल, व्हाइट हेरोन महल सुन्दर सकुरा चेरी खिलने मौसममा = शटरस्टक
हिमेजी शहर क्योटोको 50० मिनेट पश्चिममा बुलेट ट्रेनबाट छ। हिमेजी महल जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय महल हो। पुरानो महल टावर, गेट, ईशिगाकी इत्यादि छोडिएका छन्, र यो विश्व सम्पदाको रूपमा दर्ता छ। महल सेतो र धेरै सुन्दर छ। यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, म तपाईंलाई हिमोजी महल भ्रमण गर्न सिफारिश गर्दछु।
र हिमेजी क्यासललाई चेरी खिलने ठाउँका रूपमा पनि चिनिन्छ। हिमेजी क्यासलमा, करीव १,००० चेरी रूखहरू अप्रिलको सुरूमा खिलछन्। धेरै चेरी फूलहरू सेतो महल टावर र सेतो पर्खाल संग राम्रो कन्ट्रास्ट बनाउन। लाइट अप साँझमा गरिन्छ।
>> हिमेजी क्यासलको विवरणहरूको लागि, कृपया यो साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
मियाजीमा, हिरोशिमा, जापान वसन्त परिदृश्य = शटरस्टक
हिरोशिमाको मियाजीमा टापु क्योटोको फुशिमी इनारी मन्दिरको साथमा विदेशी पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय आकर्षण हो। मियाजीमामा एक सुन्दर मन्दिर छ जुन विश्व सांस्कृतिक विरासत इट्सुकुशिमा शिन्टो मन्दिरको रूपमा पनि दर्ता गरिएको छ। यस मन्दिर र यस वरपरको छेउमा करीव झण्डै २,००० चेरी फूलहरू छन्। यी चेरी फूलहरू मार्चको अन्त्यबाट प्रत्येक वर्ष अप्रिलको सुरूमा फूल्छन्। चेरी फूल र मन्दिरहरूको भिन्नता गरेर, तपाईं दर्शनीय दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
>> मियाजीमाको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
मत्सुमा! चेरि फूलहरूमा बेरिएको मत्सुमा क्यासलमा जाऔं!
जापान मा अप्रिल! हिउँ परिदृश्य, चेरी फूल, नेमोफिलिया ....
फोटोहरू: क्योटोमा चेरी फूल
जापानी वसन्त कसरी रमाइलो गर्ने! चेरी फूल, नेमोफिला आदि।
११ जापानमा सर्वश्रेष्ठ महल! हिमेजी क्यासल, मत्सुमोटो क्यासल, मत्सुयामा कैसल ...
जापान मा! सबै भन्दा राम्रो मौसम। हिमालहरू पनि सुन्दर छन्!
भिडियो: साकुरा- जापानमा चेरी फूल